Ny isa marin'ny Nosy any Karaiba
Torolalana ho an'ireo nosy any Karaiba
Mihoatra noho ny ampy mba hahita ny toerana lavorary eo amin'ny masoandro
Ny vondronosy Karaiba dia ahitana nosy mihoatra ny 7000 ao amin'ny faritra manodidina ny 1 tapitrisa kilaometatra. Misy firenena 13 ao amin'ny nosy ary 12 teratany miankina, miaraka amin'ny fifandraisana politika manerana ny faritra mankany Eoropa sy Etazonia. Firenena 10 any Amerika Latina hafa dia ahitana ny morontsiraka Karaiba. Ny faritra iray manontolo, izay antsoina matetika hoe Andininy Andrefana, dia mandray soa avy amin'ny toetr'andro any tropikaly miaraka amin'ny mari-pana amin'ny fialan-tsasatra isan-taona, ka mahatonga azy io ho anisan'ny toerana manan-tantara indrindra eran'izao tontolo izao.
Sary avy any Karaiba
Ny Karaiba dia ahitana vondrona telo lehibe ao amin'ny nosy: ny Antilles any Grande-Bretagne, ny Antilles madinika ary ny Archipel de Lucayan, izay ahitana ny Commonwealth of the Bahamas, ary ny Tiorka sy Caicos, teknika amin'ny Atlantika saingy miaraka amin'ny fifandraisana akaiky eo amin'ny fiarahamonina sy politika any Karaiba. Ireo nosy lehibe ao Kiobà, Hispaniola (mpizaka ny any Haïti sy Repoblika Dominikanina), Jamaika ary Pôrtô Rikô dia an'ny Antilles any amin'ny faritra avaratr'i Karaiba. Ny Antilles madinika dia mirakitra ny nosy atsimoatsinan-tany ary afaka mizara ho any amin'ny nosy Leeward avaratra sy ny nosy any amin'ny Ranomasina Avaratra. Ireo nosy any amin'ny faritra afovoan'i Amerika Atsimo sy Atsimo, na dia voatokana aza, dia matetika tafiditra ao amin'io vondrona io.
Amin'ny kilaometatra 42,803 kilaometatra, i Kuba no laharana voalohany amin'ny habeny sy ny mponina, saingy miaraka amin'ireo nosikely maro tsy misy mponina, ny vatohara sy ny sifoditr'ilay sarintany, ny lohatenin'ny fiovana kely indrindra araka ny teny manodidina.
Ho an'ny lafiny, mila maritiora maromaro ny mandeha amin'ny saba kely amin'ny sambo tokana enta-mavesatra roa na in-tapitrisa mba hahatongavana amin'ny mileage ilaina. Rehefa noheverin'ireo injeniera fa ny birao volkano ao afovoan'i Holandy dia sarotra sy be vato ho an'ny làlana, dia nanamboatra azy io ny mponina.
Ireo Nosy Karaiba
Ny Anglisy dia ny fiteny kolonialy malaza any Karaiba ary ny fiteny ofisialy avy amin'ny nosy 18 na vondro-nosy farafaharatsiny ao amin'ny faritra, anisan'izany ny Nosin'ny Virgin Islands sy ny Florida Keys.
Ny Espaniola dia miteny ao Kiobà, Repoblika Dominikanina ary Puerto Rico, ankoatra ny firenena kontinantan'i Meksika, ary Amerika Afovoany sy Atsimo. Ireo mpandahateny Frantsay dia manjaka amin'ny Nosy Frantsay any Guadeloupe, Martinique, St. Barts sy St. Martin, ary any Haïti, Frantsa teo aloha. Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny papiamento Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny papiamento Dikanteny tokony homarinana avy amin'ny teny anglisy Ny fitenim-paritra kreôla hafa, izay mampifandray ny endriky ny fiteny teratany, Afrikana ary mpifindra monina amin'ny fiteny kolonialina, dia mikoriana manerana ny faritra.
Kolombiana Nosy Kolombiana
Mety ho kolontsaina ny tantara politika, saingy ny kolontsaina ao Karaiba dia fomban-drazana marevaka avy amin'ireo foko maro hita any. Ny zavakanto, mozika, literatiora ary fahombiazana ara-tsakafo dia maneho ny lova navelan'ireo andevo afrikanina voatery niasa tao amin'ny toeram-pambolena siramamy, Amerindiana izay nipetraka teo amin'ireo nosy talohan'ny nahatongavan'i Christopher Columbus sy ireo mpanjanaka Eoropeana.
Inona no tsy tokony hatao ao amin'ny vakansy Karibeana?
Top Villas amin'ny teny Frantsay St. Martin
Jereo ny tranon'ny St. Croix Home of Cruzan Rum
Toerana tsara indrindra any Dominica
Ankoatra ny Reggae: Ny Torolàlana ho an'ny Mpizara any Karaiba
Iza amin'ireo nosy ireo no mitsidika ny tsipika mankany Karaiba?
Anontanio an'i Suzanne: Mety ho latsaka ao anaty sambo ve ny zazakely?
5 Zavatra Ataonao Rehefa Mandeha Ilay Brooklyn Bridge - Brooklyn Heights
Fakana biby Petryt iray amin'ny sidina fiaramanidina
Toerana 10 Ahitana Toerana Mahavariana any Inde
11 Saripika Manintona ny fetin'ny Kerala's Onam Festival
Museum Erotica tany Copenhague, Danemark
Ny Torolalana ho an'ny Mpihaza Travel
Ny hoavin'ny rafitra fizaràna manerantany ho an'ny Airline Travel
Ny hazavana Krismasy dia maneho ao Reno sy ny fanaratsiana
Fantaro momba an'i Kalokairi, nosy Grika avy amin'ny 'Mama Mia'
Fiverenan'ny Air miaraka amin'ireo mpitantana oksizenina portable
The 19 Best Brunches any Colorado
Toerana onenana ao Los Angeles